Armed Forces of the Russian Federation: ubukhulu, isakhiwo, ukubunjwa umkhuzi webutho. Umqulu we-Armed Forces
Isimo lempi, okungukuthi, amabutho WaseRussia, eyaziwa ngokwethukela njengoba Armed Forces, abangaphezu ngonyaka 2017 1,903,000 abantu, kunenkolelo ukubonakalisa uchuku WaseRussia ukuvikela isithunzi sayo indawo futhi bangasephula insimu yalo, athobele izivumelwano zamazwe ngamazwe olufanele umsebenzi.
Wadala ngoMeyi 1992 kusukela Armed Forces we-Union of Soviet Socialist Republics, amandla Russian Armed Forces ngaleso sikhathi kwakukhona olukhudlwana. Kwaba abantu abayizigidi ezingu-2,88 futhi unalo ngobukhulu kodwa zibe sebuthweni lezokuvikela emhlabeni kwezikhali zenuzi nezinye ezibulala uyaca, njengoba uhlelo kanye kahle isakhula ukuba izimoto zayo ukulethwa. Manje-Armed Forces ngokuhambisana nenani uphethe nezinqumo uMongameli we Russian Federation.
Kuze kube manje, isimo amabutho 1,013,000 amasosha, njengoba ngoMashi 2017 sacala kusebenta esanda kunyatheliswa isimemezelo kamongameli. Inombolo ephelele Russian Armed Forces abalwe ngenhla. inkonzo yezempi eRussia futhi ugijima on isikhalazo, futhi ngaphansi inkontileka, nge service inkontileka obudlange eminyakeni yamuva. Ngesikhathi ukunxusa abantu abasha bashiya ukuba sebuthweni unyaka owodwa we kweminyaka emincane iminyaka eyishumi nesishiyagalombili. Ukuze amasosha Russian engu esiphezulu - iminyaka emashumi mathandathu anamihlanu. Abafundi ezikoleni ekhethekile yezempi zingase zithande abaneminyaka engaphansi kweshumi nesishiyagalombili ngesikhathi sokungena.
Army, air force bese lasolwandle zithatha ku ezinhlwini zabo lamaphoyisa emsebenzini kuphela futhi kuphela inkontileka. высших учебных заведениях, где после окончания курсантам присваивается лейтенантское звание. Lokhu umzimba wonke siqeqeshelwe ezikhungweni yabo ehlukene imfundo ephakeme, lapho emva amasosha babelwe uLieutenant isikhundla. Ngesikhathi ukuqeqeshwa isikhathi sophomores ungene inkontileka yayo yokuqala iminyaka emihlanu, ngaleyo ndlela, kakade ezindongeni isikhungo lempi zemfundo iqala inkonzo. Izakhamizi abasele olingana iphoyisa, kwenezela izisebenzi lempi Armed Forces. Bangaphinde usayine inkontileka empini. Kuhlanganise nalezo abathweswe iziqu ababefundisiwe iminyango lempi amakolishi ezivamile babezimisele ngemva kokuthweswa iziqu ngo-stock, futhi, banelungelo isivumelwano ne-Armed Forces.
Lokhu kusebenza futhi ezempi ukuqeqeshwa amakhono, nemijikelezo yawo ngesikhathi ezempi ukuqeqeshwa izikhungo. izikhulu Junior kanye nabasebenzi wacela kungenziwa waqoqa nangaphansi inkontileka, futhi ngesikhathi socingo, okuyinto uyakuba necala ngokuphelele zonke izakhamuzi besilisa phakathi iminyaka eyishumi nesishiyagalombili namashumi amabili nesikhombisa. Ngikhonza ucingo esiwunyaka owodwa (ikhalenda), futhi ngaleso ucingo lomkhankaso Kwenziwa kabili ngonyaka - kusuka April kuya ku-July no-Okthoba kuya kuDisemba, entwasahlobo and ekwindla. kwezinyanga eziyisithupha ngemuva kokuqala inkonzo kunoma iliphi isosha lakwa-Armed Forces ungahambisa umbiko isiphelo sesimiso inkontileka, inkontileka lokuqala - iminyaka emithathu. Nokho, ngemva kweminyaka engamashumi amane ilungelo elahlekile, njengoba kugujwa iminyaka engu-wamashumi amane - umkhawulo yobudala.
Abesifazane ku-Armed Forces of the Russian Federation iwe ezingavamile kakhulu, iningi amadoda lapha. Phakathi abacishe babe izigidi ezimbili amasosha abesifazane bakha esingaphansi ayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu, ezintathu kuphela abayizinkulungwane babe iphoyisa izikhundla (kukhona ngisho colonels amabili nesishiyagalombili).
Ngamashumi amathathu anamahlanu amawaka abesifazane ngaso Usayitsheni nokuthunyelwe lamasosha nanye abayizinkulungwane UWarrant. eziyisithupha kuphela amaphesenti abesifazane (ie, abantu abangaba yizinkulungwane ezingamashumi amane nanhlanu) ngayinye kungene izikhundla eyinhloko umyalo, kanti bonke abanye bavela basebenta ndzawonye endlunkhulu. Manje, ukubaluleka - lesibambiso wezwe lakithi uma kwenzeka impi. Okokuqala kubalulekile ukuhlukanisa phakathi izinhlobo ezintathu ukugqugquzela Reserve.
Yamanje ukugqugquzela reserve, elibonisa inani ukubuthela ngo nyaka, kanye ihlelwe, lapho ubukhulu ungeze bekhonze futhi lingashajwa, kanye nokungaba ukugqugquzela reserve, okusho isibalo sabantu ningaqiniseka ukuthi uma kwenzeka nihloma impi yekwatisa amabutho. Lapha izibalo lembula iqiniso kunalokho sibonakala sethusa. Ngo-2009, abantu abayizigidi ezingu-amathathu nanye elise bezikhali ukugqugquzela izinqolobane. Ake siqhathanise: e-US, amashumi amahlanu nesithupha, ne-China - amabili namashumi kwezigidi eziyisishiyagalombili kanye.
Ngo-2010, bohlu lozalo (reserve ihlelwe) zaba isigidi sabantu amabili. Abacwaningi bamanani abantu balinganisela ukubunjwa Armed Forces futhi wamanje ukugqugquzela reserve, izinombolo ziye zaphumela ezimbi. amadoda nesishiyagalombili 2050 cishe wanyamalala ezweni lethu, inombolo yabo kuzoncishiswa kane futhi kuyoba 328 000 kuphela abantu abavela kuzo zonke izindawo. Okungukuthi, ukugqugquzela bezikhali reserves 2050 ngeke Inani kwezigidi ezingu eziyishumi nane, okuyinto kancane nge-55% kunanoma ngo-2009.
Armed Forces of the Russian Federation siqukethe isikhundla futhi ifayela junior izikhulu (abadala kanye NCOs) nezikhulu abakhonza emabuthweni ahlomile, wendawo, County, uhulumeni ku ezihlukahlukene izikhundla (basuke eyethulwe abasebenzi amayunithi) ku commissariat lempi, nehhovisi Usigaxamabhande sika, emahhovisi phesheya. Lokhu kuhlanganisa wonke kubafundi abafunda ezikhungweni zemfundo ye eMnyango Wezokuvikela nakwezempi ukuqeqeshwa izikhungo.
Ngo-2011, lonke isakhiwo Armed Forces akazange idlule isibalo sabantu ayisigidi, kuwumphumela iminyaka eminingi kanye nokwehla eqinile abantu abayizigidi ezingu-2,88, kuhlanganise elangeni ngo-1992 esigidini. Lelo nani lingaphezu engamashumi ayisithupha nantathu amaphesenti ubukhulu yempi esehambile. Kakade ngawo-2008, ngaphansi nje kwesigamu zonke zezikhulu - amaphoyisa, amaphoyisa nezikhulu. Kwabe sekufika kabusha lempi, lapho isikhundla amaphoyisa futhi amaphoyisa aye cishe iqedwe, futhi nabo engaphezu kwekhulu asixhenxe anamane amawaka isikhulu izikhundla. Ngenhlanhla, umongameli waphendula. Izifinyezo wayeka, futhi inani lamaphoyisa bafika ebantwini namakhulu amabili namashumi amabili futhi. Isibalo ojenene we-Armed Forces (Army ojenene) manje ayisithupha nane indoda.
What do izinombolo
Sizokwenza qhathanisa ubukhulu kanye nokwakheka Armed Forces e-2017 no-2014. Okwamanje, e-apharathasi Ministry RF Wezokuvikela Armed Forces izikhulu zempi banjengabantu 10 500. I-General Abasebenzi 11 300. Amabutho phansi babe abantu 450.000 e-Air Force kukhona 280 000. Navy has 185.000 ukuba Strategic Missile Amandla kukhona 120,000, amasosha Aerospace Defense abantu 165 000. amabutho Airborne bakha 45,000 bomlilo.
Ngo-2014, e-Armed Forces inombolo wawuyizinkulungwane 845 000, futhi kuyo 250 000 Army, Navy - 130000, VDV - 35 000 SNF - 80 000, i-Air Force - 150 000, futhi - ukunakwa! - Command (plus isevisi) kwaba abantu 200 000. Ngaphezu kwakho konke amabutho Lasemoyeni! Nokho, izibalo-2017 ukuphakamisa ukuthi ubukhulu Armed Forces uyahamba up kancane. (Bonke ingxenye eyinhloko yempi efanayo manje -. Amadoda, 92,9% wabo, amasosha yesifazane bonke abantu 44921)
Armed Forces njengoba inhlangano zezempi zanoma yiliphi elinye izwe, uye iziqondiso lempi, okuyizinto iqoqo imithetho eyisisekelo ngazo inqubo kokutadisha servicemen kwakheka umqondo jikelele kanjani ukuvikela amalungelo abo kanye nezithakazelo yezwe esuka zangaphandle, yangaphakathi, kanye nanoma yimiphi eminye izinsongo. Ngaphezu kwalokho, ukutadisha ngale sethi imithetho kusiza ukuthuthukisa inkonzo yezempi.
Umqulu we-Armed Forces - okuyiyona ngxenye ebaluleke kakhulu ukudlula ukulungiswa kokuqala inkonzo, ngosizo nesosha noma itilosi ujwayelene imigomo eyisisekelo kanye imiqondo. Kukhona izinhlobo ezine isimiso, futhi ngamunye kufanele ngokucophelela wafunda ngokuphelele zonke serviceman. Kukhona izibopho ezithile jikelele kanye namalungelo, ikakhulukazi iziqondiso, imithetho kokuzibandakanya.
izinhlobo eqashisa ngamafulethi
Charter izigwegwe lembula okushiwo emkhakheni wokuqeqeshelwa impi futhi lisibeka isibopho ukuhambisana nalo, kusitshela ngezinhlobo ezahlukene kwezijeziso nemivuzo. Kule ncwadi wakhuluma ihlukile Charter yesevisi yangaphakathi. Achaziwe lapha enikeziwe isijeziso ye ukwephulwa ezithile iziqondiso. Charter izigijimi isikaniso inkonzo Armed Forces kuhlanganisa ngezinhloso gama, inqubo wokuhlela futhi abhekane izigijimi isikaniso komsebenzi. Futhi kukhona aqukethe amalungelo nezibopho zabo bonke izikhulu ezempi labo lenze.
Parade koMqulu ichaza inqubo ukuhamba izikhali ngaphandle kwakhe, amathekhiniki kwesosha, izinhlobo ukwakha amayunithi ngamathuluzi nangezinyawo. Ngemva Ukuhlolisisa yisimiso kwaba yilelo nalelo butho liyadingeka ukuqonda okushiwo emkhakheni wokuqeqeshelwa impi, ukuqonda izihloko, ukuze bakwazi ukwaba isikhathi ukuba baphathe emsebenzini futhi ehlelekile phezu inkampani, afeze imisebenzi yabalindi, isikhathi, kanye nabanye abaningi.
UMkhuzi Armed Forces - UMengameli V. Putin. Uma ngokumelene ubudlova Russian zizokwenziwa noma uma kukhona usongo ngokushesha ke, kuye uzongena insimu yezwe noma ezindaweni ezithile umthetho karate, ukudala izimo ukuvimbela noma dudula ubudlova. Ngesikhathi esifanayo, noma ngokushesha azise uMongameli we Federation Council kanye State Duma ukuvuma esinqumweni.
Ukusebenzisa Armed Forces of the Russian Federation ngaphandle kwezwe kuphela emva kokuthola isinqumo we Federation Council. Lapho eRussia emhlabeni, umlawuli ophakeme kuholela ukuphathwa jikelele webutho lezempi, futhi ngesikhathi impi ibambene eqondisa ukuzivikela Russia zikhombisa ubudlova. Iphinde yakha umongameli we-Russian uMkhandlu wezokuPhepha futhi eliholwa, naye avumela simisa futhi kuchitha umyalo omkhulu Armed Forces. Ehhovisi lakhe, futhi kwamukelwa Military Emfundisweni WaseRussia, kanye nepulani lomqondo kanye BC ukwakhiwa, plan ukugqugquzela, ukuzivikela civil nokunye okuningi.
UMnyango Wezokuvikela Armed Forces of the Russian Federation - Russian Amandla ahlomile ukuphathwa umzimba, izinhloso zayo kukhona ukuthuthukiswa nokuqaliswa kwenqubomgomo isimo ngokuya ukuzivikela kazwelonke, imigomo ezingokomthetho neziqondiso ukuzivikela. Ministry uhlela ukusetshenziswa Armed Forces yimithetho ngokomthethosisekelo federal kanye nezivumelwano wonke, isekela ukulungela kudingekile obonisa imisebenzi yokwakha BC, inikeza zokuvikeleka komphakathi servicemen, kanye nemindeni yabo.
UMnyango Wezokuvikela iqhaza ekuthuthukiseni kanye nokuqaliswa kokusebenza kwenqubomgomo kahulumeni ezingeni esingenakuqhathaniswa sokubambisana kwamazwe omhlaba. Ngaphansi umnyango wakhe yiwona commissariat lempi Armed Forces elawula izifunda ezempi, kanye nezinye izakhi eziningi ukulawula ezempi, ezihlanganisa indawo. Inhloko yoMnyango UNgqongqoshe wezokuVikela esimisiwe nezicashisiwe nguMongameli we Russian Federation. Ngaphansi kwesandla sakhe ebhodini ukusebenza, okubandakanya amasekela ongqongqoshe, inkonzo izinduna, izinduna zonke izinhlobo izindiza Russian.
Jikelele Abasebenzi Russian Armed Forces
I-General Abasebenzi iyona ebusayo eyinhloko yokuphathwa lempi amabutho ahlomile abakhulu ebusayo. Kukhona imisebenzi ehlelekile onogada basemngceleni futhi eNhlangano KaHulumeni Yezokuphepha, National Guard ngaphansi amasosha, ujantshi, ukuzivikela civil futhi bonke abanye, kuhlanganise angaphandle inkonzo biko. Njengengxenye Jikelele Abasebenzi kukhona abaphathi, abaphathi kanye nezinye izinhlaka eziningi.
Imisebenzi esemqoka ye-Armed Forces of Defence we Russian Federation kuyinto amano wokuhlela ukusetshenziswa amabutho ahlomile, amabutho nabanye zokwakheka lempi nemizimba, ikhumbula division zokuphatha wezempi Russian, enifeza ukugqugquzela kanye nomsebenzi ezisebenzayo ukulungiswa Sun elihunyushwe ilanga ku ukwakheka kanye inhlangano ngesikhathi sempi. Jikelele Abasebenzi uhlela ukuthunyelwa zamasu kanye ukugqugquzela webutho lezempi kanye nezinye amabutho, amayunithi nemizimba, ukuxhumanisa imisebenzi akhawunti lempi izenzakalo, uhlela imisebenzi intelligence ukuze ezokuvikela izinhlelo bese uhlela zokuxhumana, kanye inhlolovo ukwesekwa izindiza.
Ngena evimbela ukunyakaza ngesithuthuthu. Izimpawu zomgwaqo for Abahamba. ibhayisikili endleleni
Umshushisi - ubani lo? Umshushisi edolobheni. ummeli omkhulu
Amakhowe fresh: indlela amanzi okugqumisa kubo okumnandi. Amathiphu zokupheka
Udweba kanjani umfanekiso ipenseli ukupenda inganekwane
I townsfolk - ke ... Okwakushiwo, omqondofana
Lapho uthuthukisa umbungu mammalian? ikakhulukazi ezincelisayo
Ezingokomthetho umpristi: izingubo, izigqoko, cuffs, pectoral engu-
"Biomitsin": yokusetshenziswa futhi impendulo